Vavaka mba hiverenan'ilay taloha. ? Miverena miaraka amiko ary manarena mpivady
Nivavaka mba hiverenan'ny vadiko taloha Mety ho famonjena antsika irery amin'ireo fotoana ifandraisan'ny fitiavana io.
Azontsika atao ny mamerina an'io olona io hiverina amintsika ao anatin'ny fotoana fohy kokoa noho ny nantenaina ary tamin'ny alàlan'ny hoe nivavaka fotsiny ho an'ny olona maro toa tsotra nefa tena mahery.
Amin'izao vavaka izao dia afaka mahazo ny mpiara-miasa aminay hahatsapa ny hadisoana nataony ary miverina am-pitiavana miaraka am-po mila ny orinasanay ary izany dia hahita ny hery sy ny fahombiazana ny vavaka vita amn'ny ilan'ny fanahy.
1 Nivavaka mba hiverenan'ny vadiko taloha
2 Ny vavaka ho ahy hiara-miverina amiko
3 Vavaka mahery mamerina ny vadinao
4 Vavaka mba ho sitrana ny vadiko
5 Rahoviana aho no afaka hivavaka ny vavaka mba hiverenan'ny vadiko taloha?
Ity dia iray amin'ireo fanontaniana be dia be avy amin'ireo mpamaky.
Afaka matoky ianao fa mahery ny vavaka.
Haseho anao farafahakeliny 3 izahay amin'ny tanjona samihafa. Ny olona rehetra dia nosedraina an-jatony.
Miasa amin'ny fomba tsotra, haingana sy mahomby izy ireo. Mivavaha am-pinoana fotsiny ihany ary minoa fa hihazakazaka tsara ianao.
Ny vavaka ho ahy hiara-miverina amiko
Miverina izy Amin'ny alàlan'ny herin'i SAN CIPRIANO sy ireo KOLOA telo izay miambina an'i SAN CIPRIANO, CJCG izao no ho lasa ao aoriako.
MVBO. ho avy mandady ary Ary, feno fitiavana, maniry ny hiverina sy hiala tsiny amin'ny lainga ary mangataka ahy amin'ny fitsarana sy ny fampakaram-bady haingana araka izay azo atao.
SAN CIPRIANO, hanana izany hery izany aho izay hanadino sy hanadino vehivavy izay mety ho ao an-dohany indray ary miverina mitondra ahy ary hanambara ny tenany mba hahita ny rehetra.
SAN CIPRIANO lavitra ny CJCG dia misy vehivavy, izay tadiaviny amiko mandrakariva, ANDRIAMANITRA ary IZAO, maniry ny hiaraka amiko, fa manana ny CERTAINTY IZAHO IZAO IZAO DIA FAHAMARINANA IZAO AZO, fa CJCG dia tsy afaka miaina raha tsy amiko ary izany CJCG foana Ataovy ao anatin'ny fisainanao mandrakariva ny sariko.
INDRINDRA, ARY IZANY IZANY DIA MONY, IZANY DIA TOVOTRA AZO HITANAO IZANY DIA TOKONY NY ANKAMAROANY.
Ary rehefa matory izy, dia manonofy amiko ary rehefa mifoha izy dia mieritreritra ahy sy maniry ahy, rehefa misakafo dia mihevitra ahy izy, rehefa mandingana ahy izy, amin'ny IZAO REHETRA TOKONY NY FIAINAKO TSARA ANAO.
Izay te-hahita ahy, hahatsapa ny fofoniko, hikasika ahy am-pitiavana, fa ny CJCG te hikoroka ahy, hanoroka ahy, hikarakara ahy, hiaro ahy, tia ahy 24 ora isan'andro, manao izany, fa tia ahy bebe kokoa isan'andro izy ary mahatsapa fahafinaretana fotsiny izy ny feoko
SAN CIPRIANO mahatsapa ho faniriana tsy mahazatra ahy ny CJCG, satria mbola tsy nahatsapa hafa mihitsy izy ary tsy hahatsapa mihitsy.
Hankafiziko ihany ny fahafinaretako, fa ny ahy ihany no misy ny faniriako ary ny ahy ihany no ahy, ny fiadanany raha sambatra amiko.
Misaotra anao SAN CIPRIANO noho ny fiasa nankasitrahako ary hilazako ny anaranao ho fandoavana ny CJCG tameo ary hitondra izany am-pitiavana, feno fitiavana, feno fanoloran-tena, mahatoky, mahatoky ary feno faniriana amin'ny sandriko.
Mba hamerenako ny fitiavanay, ny fitiavanay sy ny fanambadianay ho fohy araka izay tratra.
Mangataka an'izany aho amin'ny herin'ny TAFITA mainty telo izay mijery hoe CIPRIANO. Amen.
Tena mahery ny vavaka ity hiverenako taloha amiko.
Ao anatin'ny fotoana ahitana olana kely amin'ny mpiara-miasa aminay dia tsy mieritreritra mihitsy izahay fa ity no ady farany, fa aorian'izay fotoana izay dia hiova ny fiainantsika satria nanapa-kevitra ny handao anay ny olon-kafa toa tsy misy na inona na inona.
Ny zavatra dia ao anatin'ireny fotoana mahasosotra be loatra ireny matetika dia tsy mieritreritra izay lazainay ary mahita ny tenantsika manao fahadisoana maro, ireo izay mety hiteraka ny fifandraisana.
Na izany aza, io dingana io dia afaka manampy antsika hahatsapa izay nataontsika diso sy araka ny mangataka ho an'ity ex-mpiara-miasa hiverina amin'ny fiarahana, ny zava-dehibe dia ny fanaovana azy io amin'ny fanazavana ny zava-drehetra ary amin'izany vavaka izany koa dia afaka manampy antsika.
Vavaka mahery mamerina ny vadinao
"Saint Helena, mpanjakavaviko malalako, ianao izay nijaly tamim-pahoriana izay naharetanao ny fantsika telo, ny fantsika telo nentinao, ny iray ho an'ny zanakao an'i Constantine, ny iray nentinao nitondra azy avy amin'ny ranon'ny ranomasina, hanome fahasalamana sy fiarovana ho an'ireo mpanamory. Miangavy anao aho mba hanome izany fety fahatelo izany amiko, hamolavolana azy ao am-po sy ao an-tsaina (ilay olona tadiavinao), mba tsy hisian'ny fandriam-pahalemana ao am-pony.
Omeko anao ny tenako sy ny aiko, (anaran'ny olona) Tongava aty amiko tsy misy mampisaraka antsika, tsy misy sakantsakana, ianao no mila ahy amin'ny vatana, amin'ny fanahy, fa hiverina indray aho, hianjera eo an-tongotro, ary hangataka fotoana hiarahana amiko, i Saint Elena manampy ahy.
Ry Saint Elena, enga anie ny fahazavanao no mitarika ahy ao anatin'ity haizina mahatsiravina ity, mba ho isan'izay iraka miaraka amiko ianao isan'andro, izay tonga tamim-pitiavana toy ny tamin'ny fotoana nahitany ahy, hoy ny fiekenako aminao Saint Elena Io fitiavana io, toy ny alika.
Amin'ity vavaka mahery ity dia mila maka ny fitiavan'io olona izay tia ahy io aho, hiverina amiko, ilay olo-mahery, mangataka aminao aho ho hitanao ao amin'ny sarin'ny fitiavanao, apetraho eo anoloako io fitiavana io.
Ankehitriny ry Santa malala, mampanantena anao aho fa raha hitondranao azy eto an-tsaiko aho dia hijanona aho (zavatra tianao indrindra) nandritra ny herinandro, ahafahanao mahita fa matanjaka kokoa ilay fitiavana tsapako, matanjaka ilay andriambavy, natoky anao ry Santa Elena, natoky anao tokoa sy tamin'ny foko, natoky anao vadin'ny fitiavana, natoky anao malala, natoky anao amin'ny fitiavantsika. ”
Ataovy antom-bavaka ny hanavaozana ny mpiara-miasa aminao amin'ny finoana be.
Ny fahazoanao ny mpiara-miasa taloha dia mihoatra noho ny nangataka anao hody, dia miverina amin'ny fahitana azy amin'ny lafiny rehetra amin'ny teny izany. Enga anie ny fitiavana izay efa maty dia hatsangana indray hatanjaka noho ny teo aloha.
Tsy azontsika atao ny mandray an'io vavaka io amin'ny fitiavan-tena, amin'ny faniriantsika hanery ny tenantsika amin'ny olon-kafa hanao izay tadiavintsika na inona na inona vidiny.
Izany dia vavaka izay tsy maintsy atao amin'ny tanana eny an-tanana, fantaro aloha hoe nanao ny tsy mety nataontsika ary tamin'ny fahavononantsika tanteraka ny miala tsiny ary hanorina indray ilay fifandraisana azo antoka fa tsapan'ny olona hafa na vonona hanao toy izany koa.
Vavaka mba ho sitrana ny vadiko
Oh Saint Elena ny hazo fijaliana, aza adino aho, ry Masiko, mahery amin'ny fitiavana, tonga aho aminao hilaza aminao, hanontany sy hangataka aminao, satria tokony ho fantatrao fa (ny anaran'ilay olona) dia nandao ny trano noho ny Vehivavy iray hafa, avereno aty amiko.
Ry Saint Elena, eritrereto ny fahasimbana izay nahatonga ahy hiaraka amin'ny vehivavy hafa, heveriko fa fikomiana izany, manana izany faniriana izany aho, tiako izy avy amin'ny foko, ampody azy hiverina tsy ho ela, ampio amiko izy, tsy Manadino ahy, na inona na inona ataoko, aza mitsahatra ny mieritreritra momba ahy.
Saint Elena ny hazo fijaliana, ny fitiavana tsapako ho an'ity lehilahy ity dia lehibe tokoa, nomeko azy ny fahatanorako, ny taona tsara indrindra amin'ny fiainako, izaho no renin'ireo zanany, ny fanaintainana sy ny alaheloko lehibe dia lehibe, lasa izy milamina rehefa tonga toy ny zanak'ondry malefaka ary mangataka ny fitiavako.
Manantena aho fa hiverina amin'ny laoniny ny vavaka ho an'ny vadiko sy ny vadiko.
Ny fanambadiana dia fanoloran-tena izay raisina eo anelanelan'ny olona roa mandra-pahatongan'ny FAHAFATESANA Manasarà azy ireo, fa ity farany kosa matetika tsy tanterahina satria na oviana na oviana ny fifandraisana dia mety hiharatsy ka mahatonga ny fahasimban'ny fifandraisana ary avy eo ny fisaraham-panambadiana.
Olana iray izay nivoatra teo amin'ny fiaraha-monina ary na ny mpivady izay mpino aza.
Amin'ireny tranga ireny ity vavaka ity dia afaka manampy be dia be satria ahafahantsika mahazo tsara an'io vady iona tsy te hanohy ny fifandraisana ianao.
Ao amin'ny fiaraha-monina izay mampianatra fa ariana ny tsy misy ilana azy, mahery ny fananana fitaovana hahafahantsika mitazona ny fanambadiana amin'ny fomba mahasalama sy amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-panahy tanteraka.
Rahoviana aho no afaka hivavaka ny vavaka mba hiverenan'ny vadiko taloha?
Ity vavaka ity dia azo atao am-bavaka arak'izay tianao.
Tsy manam-potoana amin'ny andro na fotoana amin'ny herinandro io.
Ny zava-dehibe dia ny hivavaka amin'ny vavaka mba hiverenan'ny vadiko izay mino be dia be ary mino fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Vavaka mafy ho an'i Santa Muerte mba hiverenan'ny havan-tiana
Ny vavaka amin-kery manaisotra ny maso ratsy
Vavaka niantso ahy anio